I-Semalt ichaza iziphi izici I-Good Image Scraper kufanele ibe nayo
Kukhona izikhathi lapho isithombe sasifanele amazwi ayizinkulungwane, kodwa manje izithombe zifanelekile amathandana angamakhulu amaningana, ama-tweets, izithupha kanye namasheya. Ngaphezu kwalokhu, izithombe zihlungwa, zabiwe, zaphinda zaphinda zenziwe futhi zahlelwa ukuchuma kwebhizinisi. Abantu ngokuvamile bahlambalaza izithombe ngaphandle kwemvume futhi bahlose ukwandisa inethiwekhi yabo emhlabeni jikelele - cavi elettrici on line. Ukukhipha isithombe kungenye yezihloko ezinganakwa kakhulu kulezi zinsuku, kodwa ukuthi leli khono ngaphansi kwebhokisi lakho lesitokisi lizokunika izinzuzo ezihlukahlukene. Kubalulekile ukukhetha uhlobo olulungile lwesithombe esilungile esingasiza ukukhulisa ibhizinisi lakho nokuthuthukisa ukusebenza jikelele kwewebhusayithi. Lapha siye saxoxa ngezinye izici umfanekiso omkhulu okufanele ube nawo:
Indalo yokuPhawula nokuChofoza:
Isithombe se-scraper sisiza izithombe ze-Google ne-Bing. Futhi, kungaba kalula ukudala ama-agent wokukhipha futhi wenze isipiliyoni sakho sokuphequlula ngaphezu kokumangalisayo. Ngaphezu kwalokho, isithombe se-scraper asidingi ukuthi ube namakhono wokuhlela noma okubhala.
Ukumaketha Okuqukethwe Okubukwayo:
Ngesithombe esincane, ungakhipha okuqukethwe okuqondile futhi ubheke inombolo enkulu yamakhasi ewebhu kalula. Futhi, kusiza ukunciphisa izidingo zokucubungula phansi futhi kukuthola izithombe eziphakeme kakhulu ngaphakathi kwendaba yamaminithi.
Ukurekhoda ukuziphatha komsebenzisi:
Okungeziwe okujwayelekile kanye nedatha yedatha akurekho ukuziphatha kwabasebenzisi. Kodwa isithombe se-scraper singarekhoda ukuziphatha komsebenzisi ngezinga elithile futhi kusize ukuthi uhambe ngokusebenzisa amakhasi wewebhu.
Ubuchwepheshe bokufunda komshini:
Kunezinto ezimbalwa zokuhlunga iwebhu namathuluzi okumbumbulu kwedatha aneteknoloji yokufunda yomshini. Isithombe se-scraper sineli buchwepheshe futhi siqaphela kalula izithombe zakho kanye nombhalo wabo. Iyanciphisa izindleko zokondla ngamaphesenti angu-70% futhi uthola idatha oyifunayo kusuka emapikhumeni ahlosiwe.
Ukungena ngemvume okuzenzakalelayo:
Isithombe se-scraper senza kube lula kuwe ukuthi ufinyelele okuqukethwe kwewebhu futhi uhlose inombolo enkulu yamasayithi. Futhi, awudingi noma yiziphi izimpawu ezithile zokufinyelela okuqukethwe okuvikelwe kusuka kusayithi. Esikhundleni salokho, ungakwazi ukufinyelela futhi ukhiphe iwebhusayithi yonke kuhlanganise nombhalo wayo nezithombe ezine-image scraper, ngaphandle kwesidingo sokungena ngemvume.
Leli thuluzi lingakutshela izithombe namavidiyo kodwa futhi londoloza isikhathi sakho futhi lenze imisebenzi yalo ngokulula. Ngamafuphi, ungaqiniseka ukuthi uzothola izithombe eziphezulu futhi uthole idatha enembile kusuka kumakhasi amaningi wewebhu njengoba ufuna.
Ngomfanekiso wesithombe, ungaphula okuqukethwe kwewebhu, okuqukethwe kwedatha, nemibhalo evela kunani elikhulu lamasayithi. Izokhipha ngokuzenzakalelayo izindaba kanye nezithombe zazo bese zibhalela kabusha izihloko zazo.
Uma unenhlanhla, uzokwazi ukuthola izithombe ezingenayo i-copyright ku-Google, Bing, Yahoo noma enye yolwazi lwe-intanethi. Ingxenye ebaluleke kunazo zonke ukuthi ungakwazi ukuhlunga izithombe ozifunayo ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi. Kunzima kakhulu ukuthola amadathasethi afana nezidingo zethu. Ngokuthakazelisayo, isithombe se-scraper senza umsebenzi wakho ube lula futhi ukukhetha kuqala kwamabhizinisi namamethi aphezulu. Uma uhlonipha imithetho ye-copyright, uzothola okungcono kakhulu esithombeni ithuluzi lokuhlunga futhi udale umzila owedlule kunetha.